Alaabada Mashiinka Mashiinka Mashiinka iyo Warshadaha - Warshadaha Mashiinka Maskaxda qalliinka
Maskaxda Qalliinka Maskaxda
Waa maxay walxaha imtixaanka? Dharka badbaadada caafimaadku waa qalab badbaado oo leh heer aad u sareeya, kormeerka tayada ayaa aad u adag, una baahan in la tijaabiyo waxyaabo badan. La kulan hal halbeeg, oo u baahan in la tijaabiyo waxqabadka badan. Sababtoo ah gaar ahaaneed jawiga isticmaalka, waxyaabaha sheyga baarista ee guud ahaan dharka lagu ilaaliyo ayaa ah qiimeynta buufinta, waxqabadka jeermiska, shuruudaha ka-hortagga, xoogga jabinta, waalashada filinka, hufnaanta ololka ...
Wajiga Wejiga ee Maqaarka
Codsiga: 1. Codsi: adeegsiga dhismaha, macdanta, dhar-ka-gooshka, dawaynta shiidi. 2. Codsiyada: nolol maalmeedka, warshadaha warshad, SPA-yada, isbitaalada, rugaha caafimaad, iskuulka, meelaha shaqada, iwm. 3. Kahortag raadinta gaaska dabiiciga ah iyo urka astaamaha: Baakadaha & Dhoofinta: Muddada Bixinta: Waxaad ku bixin kartaa amarka iyada oo loo marayo T / T , Ali Trade guarantee, Waqtiga gaarsiinta midowga: 1: muunad 1-3 maalmood oo shaqo 2: Waqtiga soosaarista amarada 5-15 maalmood, waxay kuxirantahay tirada
3 Maska Qalliinka Qalliinka
Wajiga Mashiinka Maska Maska Maska Saafiga 3 Ply
Wejiga Caafimaadka Maskaxda
Faa'iidadeena: 1. Welcom OEM & ODM. 2. Qiimaha Warshadaha, kala duwanaanshaha qiimaha dhexe. 3. Tayada si wanaagsan ayaa loo xakameyn karaa. 4. Alaab fara badan, qaabka, nooca, nashqadaha iwm 5. Wax alla wixii aad rabto, waxaan kuu raadin karnaa si sahlan wakhti kasta. 6. Yaqaanaan suuqa iyo badeecad kasta oo aan bixinno. 7. Koox xirfad iyo khibrad leh. 8. "Jawaab Degdeg ah" & adeeg fiican ka dib iibinta. Tilmaamaha Maska: Su'aalaha la isweydiiyo: Q1: Haddii aanan ka helin waxa aan rabno boggaaga, maxay tahay inaan sameyno? A1: Email ...
3 Maska Maska oo Maska Lagu Xidho
Faahfaahinta ： Hantida: Qalabka Polymer Medical & Alaabta Goobta asal ahaan: Fujian, china Qalabka Qalabka: Nooca I Waxyaabaha: pp aan lahayn, warqad warqad duuban Midabka: Buluug / cagaar / cad / casaan Cabbir: 17.5 * 9.5cm BFE: kor ka 99% Shahaado : Xirmooyinka CE: 50pcs / sanduuq, 2000pcs / ctn Asal ahaan: Shiinaha MOQ: 10000 gogo 'Sheyga magaca: waji-xidhka waji-xidhka Faa'iidadayada: 1. Welcom OEM & ODM. 2. Qiimaha Warshadaha, kala duwanaanshaha qiimaha dhexe. 3. Tayada c ...
Maskaxda qalliinka dib loo isticmaali karo
Faahfaahinta ： Hantida: Qalabka Polymer Medical & Alaabta Goobta asal ahaan: Fujian, china Qalabka Qalabka: Fasalka I Waxyaabaha: pp aan lahayn, warqad warqad duuban Midabka: Buluug / cagaar / caddaan / casaan Cabbir: 17.5 * 9.5cm BFE: kor ka 99% Shahaado : Xirmooyinka CE: 50pcs / sanduuq, 2000pcs / ctn Asal ahaan: Shiinaha MOQ: 10000 gogo 'Shayga magaca: xarkaha weji-wejiga wejiga Hoggaanka Waqtiga: Tirada (Kartoonada) 1 - 10 11 - 100 101 - 1000> 1000 ...
Xakameynta dareeraha ah waxaa loola jeedaa dharka ilaalinta caafimaadka waa inay awood u leedahay inay ka hortagto galitaanka biyaha, dhiigga, aalkolada iyo cabitaannada kale, oo leh in ka badan 4 heerar oo biyo-la'aan ah, si looga fogaado fayraska ay qaadaan dhiigga bukaanka, dareeraha jirka iyo dheecaanka kale ee faafa cudurka shaqaalaha caafimaadka. Caqabadda microbial waxaa loola jeedaa dharka kahortagga bakteeriyada iyo fayraska, inta badan si looga hortago isu-gudbinta xiriirka ka dhexeeya shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanka iyo caabuqa-is-dhaafka Shaandhayn
Maska qalliinka Asda
Faahfaahinta ： Hantida: Qalabka Polymer Medical & Alaabta Goobta asal ahaan: Fujian, china Qalabka Qalabka: Nooca I Waxyaabaha: pp aan lahayn, warqad warqad duuban Midabka: Buluug / cagaar / cad / casaan Cabbir: 17.5 * 9.5cm BFE: kor ka 99% Shahaado : Xirmooyinka CE: 50pcs / sanduuq, 2000pcs / ctn Asal ahaan: Shiinaha MOQ: 10000 gogo 'Shayga magaca: shayga wejiga daboola
Maaskaro Qalliinka 3 Ply
Waqtiga Hogaanka: Tirada (kartoonada) 1 - 10 11 - 100 101 - 1000> 1000 Est. Waqtiga (maalmaha) 7 20 30 In laga wada hadlo Tilmaamaha: Codsiga: 1. Codsiga: adeegsiga dhismaha, macdanta, dhar-ka-gooshka, dawada shiidi. 2. Codsiyada: nolol maalmeedka, warshadaha warshad, SPA-yada, isbitaalada, rugaha caafimaad, iskuulka, meelaha shaqada, iwm. 3. Kahortaga raad raacyada gaaska dabiiciga ah iyo urka 4. Kahortaga walxaha ay ka kooban yihiin qoditaanka, nadiifinta, goynta iyo b .. .